Usehlukene neGallo Records uNoma Khumalo
UMCULI uNoma Khumalo kuthiwa ugqigqa odokotela ngenxa yokhwantalala Isithombe: FACEBOOK/NOMA
INTATHELI YESOLEZWE | October 4, 2019
KUPHELILE obekuhlanganisa umculi owawina umncintiswano i-Idols SA ngo-2016 uNoma Khumalo nesitebele abeqopha ngaphansi kwaso iGallo Records.
Ngeledlule Isolezwe ngoMgqibelo labika ngesimo sikaNoma esavezwa ngumthombo osondelene naye ukuthi ugqigqa odokotela ngenxa yokuma nse kwempilo yakhe osekumphathise ngokhwantalala.
Kubikwa ukuthi imisebenzi ubesezitholela yena kepha akhokhele iGallo Records u-20% wemali ayenzayo njengokwesivumelwano sabo.
Akukona okokuqala iGallo Records ibekwa njengenkampani engabanakekeli abaculi bayo. Ngesikhathi kunenkonzo yesikhumbuzo sikaThami Shobede oshone ngenyanga edlule ngenxa yokuguliswa wukhwantalala, umngani wakhe omkhulu uThemba Humana wathi iGallo Records ayizange ibe nandaba ngesikhathi yaziswa ukuthi uThami usesibhedlela uyagula.
"Sayifonela iGallo siyitshela ukuthi uThami usesibhedlela, kepha abazange basiphendule. IGallo ayizange imnakekele uThami obenenkontileka nayo. Ubesefuna ukuphuma kwinkontileka. Yonke imisebenzi yakhe yokucula ibivela kubangani bakhe kepha iGallo ifune ingxenye yomholo," kusho uHumana.
Esitatimendeni esithunyelelwe iTshisaLIVE, imenenja yeGallo Records uMnuz Rob Cowling uthe imibiko ingamampunge kanti futhi uNoma watshela inkampani ukuthi akanankinga nayo.
"Ngokwazi kwami akulona iqiniso lokhu. UNoma angafonelwa kalula kanti uqinisekisile kuthina ukuthi akanankinga, lezi zinsolo azilona iqiniso. Kahlekahle, uNoma ukhiphile, ukhankasa iculo lakhe elisha," kusho uCowling.
UCowling uphinde wacacisa ukuthi ifindo phakathi kweGallo noNoma lagqashuka ngoFebhruwari.